1 Maarso- Maalinta caalamiga ee u dulqaad la’aanta takoorka | Radio Himilo
Home / Maalmaha Caalamiga / 1 Maarso- Maalinta caalamiga ee u dulqaad la’aanta takoorka
1 Maarso- Maalinta caalamiga ee u dulqaad la’aanta takoorka
Posted by: Ahmed Haaddi March 1, 2019
Himo FM – 1-da March waxaa loo calaamadeeyay maalinta caalamiga ee u dulqaadasho la’aanta takoorka. Si sannadle ah ayaa maalintan loogu dabaaldegaa, Ujeedadu waxay tahay in kor loo qaado sinnaanta sharciga dhammaan dawladaha xubnaha ka ah Qaramada Midoobay.Waa maalin cod dheer lagu diido takoorka layskuna booriyo ka hortagiisa, u dhaqdhaqaaqayaasha dadka la faquuqo ayaa far muuqa sharciyada ay u arkaan kuwo sababi kara inuu yimaado takoor.
Barnaamijka wadaaga ah ee UNAIDS ayaa lagu muujiyay baahida loo qabo in dib u habeyn lagu sameeyo sharciyada faquuqa ee dalalka xubnaha ka ah jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa. Markii ugu horreysay ee la xusay maalintan waxay aheyd kowdii March sannadkii 2014-kii, bilaabideeda waxaa lahaa agaasimaha fullinta UNAIDS Michel Sidibé. Tan iyo xilligaa waxaa diiradda la saaray la dagaalanka takoorka lagu sameeyo dadka la nool HIV/AIDS.
Abaabulka u dabaaldegga maalinta u dul qaadasho la’aanta faquuqa waxaa gar wadeen ka ah UNAIDS oo sannadkan hal-ku-dheg looga dhigay ‘bulsho ka xor ah takoor’, waxaa dadka loogu baaqayaa inay ilaaliyaan xorriyadda aasaasi u ah nolosha ee uu u baahan yahay qof kasta oo koonkan ku nool, waa inuu awood u yeesho helidda adeeg caafimaad isagoon la kulmin jinsi takoor, waxaa laysku bogaadiyay in dadka aan laga dhigin Tuke Canbaar leh. Iyadoo baraarujintan la wado haddana ugu yaraan labaatan dal ayaa weli xayiraad saara socdaalka dadka qaba HIV-ga,
Dadka la nool HIV waxaa la yiri waxay si maalinle ah u wajahaan far muuq lagu fogeeyo, taas waxay u horseedaa inay waayaan waxyaabo daruuri u ah noloshooda sida daryeel caafimaad. “Ruux walba kaalin mug leh ayuu ka ciyaari karaa tirtiridda faquuqa isagoo adeegsanaya habab kala duwan, kuwaas oo uu ka dhex bilaabi karo bulshada deegaankiisa, waxaan qof walba ugu baaqayaa inuu abuuro deegaan ka caafimaad qaba takoorka, waxaa muhiim ah in kor loo qaado wacyi gelinta. sharciyadu waa inay wax ilaaliyaan, ee waa inaysan waxyeelo horseedin waa inaan si wada jir ah u bedeleno sharciyada dhiiri geliya faquuqa.” sidaa waxaa lagu yiri qoraal ka soo baxay UNAIDS
Sida laga soo xigtay agaasimaha fullinta UNAIDS, Michel Sidibe, falalka ku qotoma xadgudubka xuquuqda aadanaha waxay ka dhacaan dunida oo dhan waxaana sabab u ah caadooyin iyo sharciyo dhinac u xaglinaya, sidaa darteed waddamada waxa waajib ku ah inay sameeyaan siyaasad sinnaanta lagu hubinayo. Meelaha ololaha ka dhanka ah faquuqa lagu faafin doono sannadaha soo socda waxaa ka mid ah baraha bulshada.
Previous: Maqal:- Barnaamijka Kas-wadaag
Next: Sarkaal si xowli ah u kaxeeyay gaari isagoo ceyrsanaya tuugo oo la xukumay!
Maalinta Caalamiga ah ee U-dulqaadasho la’aanta Gudniinka Fircooniga